ngomphathi ku 20-08-05
IMIGAQO YOKUSETYENZISWA KWE-13 NGOKUSETYENZISWA NGAMAKHONO
Amatyathanga asetyenziswa yonke imihla kwiintlobo ngeentlobo zeerigging kunye nezicelo zokukhusela umthwalo. Ngaphambi kokuba usebenzise ikhonkco, kukho imigaqo esithoba ebalulekileyo ekufuneka uyigcinile engqondweni. Umgaqo 1: Ukusebenza kwemveliso kufuneka kuqala kujonge ukuba kukho iziphene kuwo onke amakhamandela, imodeli yomdlalo, uqhagamshelo luqinile kwaye lu ...
Uyisebenzisa ngokuchanekileyo njani i-rigging master link?
ngomphathi ku 20-05-22
1. Ikhonkco eliyintloko elisetyenziselwa ukwenza isilingi, intambo yocingo, kunye nesilingi kufuneka ibe yiringi ende. Ngamanye amaxesha, iringi esisetyhula ingasetyenziswa. 2. Ikhonkco lokudibanisa kufuneka libe yiringi ende okanye ikhonkco eyintloko; 3. Akuvumelekanga ukuba uphinde usebenzise umsesane wokuphakamisa onesiphene emva kokuwelda; 4. I ...
Ungawuthintela njani umbhinqo we-anchor kunye ne-chain shackle ukusuka ekuqhekezeni?
Omnye wemigangatho yokukhutshwa kwamakhamandela kukwenzeka kweentanda kunye nokuqhekeka okukhulu. Le nto ithwaxa abantu abaninzi. Singakuthintela njani oku ukuba kungenzeki? 1. Ngokwendawo yokusetyenziswa, khetha iisilingi zezinto ezifanelekileyo kunye neemodeli, gcwalisa ubhaliso ...
Uyigcina njani ikhonkco lokuphakamisa iBakala 80 ixesha elide lokusebenza?
Ukugcinwa kwetyathanga lokunyusa i-G80 kubalulekile, sicebisa oku kulondolozwa kulandelayo kwityathanga lokuphakamisa: 1. I-sprocket kufuneka ifakwe kwishafti ngaphandle kwe-skew kunye ne-swing. Kwindibano efanayo yokuhambisa. Ubuso bokuphela kweeprotheyitha ezimbini kufuneka zibe kwindiza enye. Xa c ...